प्रेम बानियाँ भन्छन, २३ मिनेटको भनिएकाे भिडियोमा बाँकी भिडियो खोई ? – Dainik Pana
काठमाडौँ : पत्रकार शालिकराम पुडासैनिले आफुलाई रवि लामिछाने सहित ३ जना आत्मा ह*त्या गर्न वाध्य बनाएको भन्ने भिडियो सार्वजनिक भए पछी प्रहरीले बिहीवार नै तिनै जनालाई प*क्राउ गरेको छ । न्युज २४ टेलि भिजनका पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई पक्राउ बिहीवार नै प*क्राउ गरेको हो । पत्राउ परेका तिनै जनालाई गए राती नै चितवन ल्याईएको छ ।
रवि लामिछाने प*क्राउ परेपछी प्रेम बानियाँले यसो भनेका छन् : रबिजी Rabi Lamichhane प्रकरणमा प्रचलित कानुनको सम्मान गर्दै … नम्बर १, आत्मह*त्या गरेको मान्छेको पकेट भित्रको मोबाइलमा रहेको भिडियो ‘इडिटेड भर्सन’ मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो ? उसलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो त अनुसन्धानको विषय थियो र प्रहरी अधिकारी बाहेक अरु कसैले यो सार्वजनिक गर्नै सक्दैन/मिल्दैन !
यदि अपराध पुष्टि भयो भने मात्रै प्रहरीले यसलाई सार्वजनिक गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन किन भुलियो ? कुल २३ मिनेटको भनिएकाे भिडियोमा खोई बाँकी भिडियो ? अरु पनि त आरोपित हुनसक्छन् ? नम्बर २, भोलि, कोही कसैले कथम्कदाचित, प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड वा देउवाका नाममा तिम्रा कारण मैले आत्मह*त्या गरेको हूँ भनेर पासो लगायो भने उहाँहरु जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ?
नम्बर ३, जनहित सम्वन्धि कार्यक्रम प्रशारणको अन्तिम तयारीमा रहेकावेला एउटा पत्रकारलाई कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदिई केवल डेढ घण्टाअगाडि टेलिभिजन स्टेशनबाटै पक्राउ गर्दा के त्यो न्यायिक हुन्छ? जबकि उसले सार्वजनिक रुपमा भनिसकेको छ ‘यदि म दोषि ठहरिए कानुनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार छु।’ भोलि फेरि कसैलाई यस्तै पर्यो भने … ??? नम्बर ४, नेपाली पत्रकारितामा यो ‘ग्याङ्फाइट’को इतिहासले नेपाली समाजलाई अति-तल गिराएको छ, यसमा हाबि अतिवाद् रबिजी बिरोधी र समर्थकले समाज को रंग कुरुप देखिएको छ !
अब एउटा बिन्दूमा हामी सबै मिलौं । पत्रकारिता अब सूत्रभन्दा माथि आयो कृपया, सबैले बुझौं। यी चार सवनलहरुका साथ हामी संसारभरबाट बोल्न तयार छौं । के यी प्रश्नहरु गलत छन् ? अब दुनियाँ साँघुरो भइसक्यो । हामी न्यायका निम्ति जहाँसुकैबाट बोल्न तयार छौं । कृपया रबिजीलाई ‘अतिदेवत्वकरण र अति राक्षसिकरण नगरौं’ संयमतापूर्वक सम्मानित अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गरौं ।
Posted on August 10, 2019 Author Dainik Pana
Posted on August 4, 2019 Author Dainik Pana
Posted on September 15, 2019 Author Dainik Pana